मोरङमा चार महिनाको ग’र्भ निस्केपछि, खुल्यो १७ वर्षकी किशोरी सा’मुहिक ब’लात्कारको घ’टना , दुई युवक पक्राउ” – Life Nepali
मोरङमा चार महिनाको ग’र्भ निस्केपछि, खुल्यो १७ वर्षकी किशोरी सा’मुहिक ब’लात्कारको घ’टना , दुई युवक पक्राउ”
विराटनगर २४ असार। मोरङमा, प्रहरीले सा मूहिक ब ला त्का रमा संल ग्नको आ रोपमा, दुई जनाला,ई ,प क्राउ गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय, उर्ला बारीले चार महिनाअघि १७ वर्षकी कि शोरीमाथि भएको सा मूहिक ब ला त्का रमा सं लग्न भएको आ रोपमा ,उर्लाबारी, नगरपालिका– ५ का ३० वर्षका ‘प्रदीप, खतिवडा र २१ वर्षका भेषरा, ज आचार्यलाई प क्राउ गरेको हो । प्रहरीका अनुसार २७ फगुनमा दि उँसो’ करिब ३ बजे कि शोरी’ घरमा ए क्लै भएको अवस्थामा छि मेकी दुई युव,कले ब ला त्का र गरेका हुन् ।
ग र्भवती भएपछि खु,ल्यो ब ला,त्का र : मो र,ङका प्रहरी नायव उपरीक्षक मानबहादुर राईका अनुसार कि शोरी ग र्भव ती भएपछि घ टना’ बाहिर ‘आएको हो । कि शो रीलाई घ टना’ कसैलाई सुना’ए मा र्ने ‘ध म्की’ दिएका का रण’ करिब चार महिना घ टना’ बाहिर आएको थिएन । तर कि शारी’ ग र्भ वती’ रहेको खुलेपछि’ आफन्त सोमबार’ इलाका प्रहरी कार्यालय उ र्लाबारी’मा उ जु री दिन गएका थिए ।
चार महि नापछि जा हेरी आएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीले सोही दिन दुई युवकलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरी स्रोतका अनुसार पी डित पक्षलाई सुरु मा प्रहरीमा उ जुरी गर्न दिइएको थिएन । घ टना गाउँमै मि लाउने प्र यास भए पनि ग र्भ रहेको पुष्टि भएपछि पी डित परिवारले प्रहरीमा जा हेरी दिएको थियो । अनलाइनखबरबाट
Previous कहिले खुल्छ सार्वजनिक यातायात ? यस्तो छ सरकार र व्यवसायीको तयारी ! (पढ्नुहोस )
Next दु:खद खबर : खाना पकाउने क्रममा क’रेन्ट लागेर एक युवतीको मृ’त्यु !